Ahụmahụ Semalt: Olee otú Backlinks Si Emetụta Mgbasa Ozi SEO gị
N'ọnọdụ ọ bụla n'ịntanetị, njikwa njikwa search engine dị oké mkpa iji gosi visibiliti ntanetịnakwa dị ka nkwenkwe na ịbawanye ụba. Maka ihe ndị a na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, nhazi ahụ bụ ihe dị mkpa maka ihe ọ bụla dijitalụ marketerachọrọ ịchọpụta SEO. Dịka ihe omume Google na-eme kwa afọ nke ndị Searchstrics wepụtara, ihe ndị Google algorithm na-ejiịkwado saịtị gụnyere ọdịnaya dị mkpa na ikike, ọrụ ntanetị na ntanetị weebụ nke saịtị gị, njirimara na-egosi site na ọdịnaya Googlemmata na ikikere backlinks.
Otú ọ dị, nyochaa nke ụfọdụ n'ime ebe nrụọrụ weebụ na-agba ọsọ n'oge a nwere ike igosipụta kpamkpamnchọpụta dị iche iche - chinese tv buy online. Dị ka ọmụmaatụ, maka otu ụdị okwu dị mkpirikpi, àgwà na oke nke njikọ nwere ike ọ gaghị apụta Google ọnọdụna-adaba gị. Dịka ọmụmaatụ, ebe nrụọrụ weebụ nwere njikọ na-adịghị mma nwere ike ịkwalite elu karịa ndị nwere akara azụ azụ dị ike.
Ndị na-achọ nchọpụta na-akọ na n'ime oge ahụ, backlinks na-ebelata dịka ọkwaihe dị ka Google algorithm n'oge a na-ahọrọ ihe ndị ọzọ. Ngbanwe a sitere na ịrị elu ahịa ahịa mgbasa ozi. Ọhaneze nwere ọtụtụnjikọ nkekọrịta nke nwere ike ime ka ihe nnochite anya kacha mma. N'ihi ya, backlinks abụghị isi ihe dịka ọ dịbutupu. Ha bụ naanị ihe ga-emebi ụdọ mgbe ọ na-eme ka saịtị dị elu.
Jack Miller, Onye Mmezi Ahịa Ahịa nke Ọkachamara ,ekwu banyere mkpa nke nkwado azụ maka mgbasa ozi SEO pụrụ iche.
Ọdịnaya na Ntuziaka Onye Ọrụ
Google kwuru na otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa iji tụlee mgbe ime SEO bụọdịnaya dị mkpa. Nke a bụ uru nke ọdịnaya ị na-etinye na saịtị gị na onye ọrụ ọ bụghị nanị ịbịaru tonnes nke okporo ụzọ. Namkpa nke ọdịnaya dị na ọchụchọ ọchụchọ. Bots nke Google nwekwara ike ịchọpụta ohere nke onye na-eji ọnọdụ a eme ihe. Nwaokpu SEO usoro dị ka isiokwu ịṅụ nri adịghị arụ ọrụ na Google scraps ndị dị otú ahụ weebụsaịtị na ihe nke ụbọchị.
Ntuziaka nke onye ọrụ na-adabere n'otú onye ọrụ si ejikọta ọdịnaya dị mkpa n'imensonaazụ ọchụchọ. Ngwá ọrụ na-arụ ọrụ na-eme ka ọ dị mfe iji nweta oke okporo ụzọ ugbu a ejirila mee ihe ọ bụla n'ụzọ kwesịrị ekwesị nke Google algorithm,na-eme usoro dum ugbu a dabere. Google na-adụ ọdụ ka ndị na-ere ahịa Intaneti gbanwee ihe dị mkpa na onye ọrụafọ ojuju, obughi nani okwu.
Ntaneti weebụ gị ekwesịghị inwe njehie na nchinchi. Ebe ahụ kwesịrị ịbụngwa ngwa na anabata ọrụ na ngwaọrụ dị iche iche, sistemụ arụmọrụ gafee ihe nchọgharị dị iche iche. Google algorithm akwụ ụgwọ saịtị naa anabata mobile enyi na enyi interface site na ogo. Ihe ndị ọzọ dịka ọsọ ọsọ, ntinye faịlụ, njikọta n'ime, na HTTPSnchịkọta na-abanye na ya mgbe ị na-ejikọta ọrụaka na SEO na njikọta.
N'ahịa ahịa dijitalụ, ọrụ SEO na-eme ka azụ azụ nke ọnụnọ n'ịntanetị nadijitalụ ntanetị. Backlinking bụ otu n'ime SEO atụmatụ ndị na-eme anwansi mgbe ogo nrụọrụ weebụ. Otú ọ dị, na nso nso amgbanwe na ụzọ Google algorithm na-arụ ọrụ, ihe ndị ọzọ dị ka iwu HTTPS, Mobile friendly initiatives, ọdịnaya ọdịnaya na-elekọta mmadụahịa mgbasa ozi na-abanye. Nhọrọ dị elu na ọnụego, ihe nchịkọta nri, na usoro dịka nsị-na-gbanwee agaghị arụ ọrụ ọzọakpata SEO ugwo. N'ihi ya, nkwụghachi azụ abụghịkwa ihe ga-etinye nnukwu ibu mgbe ịchọrọ ịme mgbasa ozi SEO pụrụ iche.